I-Semalt icebisa ii-Free Web Scraping Tools ukuze zikhuphe i-Data Data
iinketho, iimpawu kunye neepropati, ngelixa ezinye iinkonzo azilungele nto. I-web-scraping services esiye sixoxanise apha ayinzima kakhulu, kwaye iyakwazi ukukhawuleza inani elikhulu leendawo kunye neeblogi. Kuyinyani ukuba kukho ezininzi iinkqubo zokurhola, kodwa ezi zilandelayo ziyi-freeware kwaye ziza kuzalisekisa iimfuno zakho zoshishino.
Ukungenisa i-Import.io yinkonzo enamandla yokukhupha idatha yewebhu elandela iindlela ezilula zokukhipha idatha. Oku kunokwenza iifasethi zakho zangasese kwaye ungenise idatha ukusuka kwelinye ikhasi lewebhu ukuya kwelinye. Ngaphezu koko, ungagcina idatha efunwayo kwi diski yakho, kwaye i-Import.io ayifuni nayiphi na ikhowudi yokukhangela amaninzi ewebhu.
2. Ibhokisi le-Scrape
Ibhokisi ye-Scrape yenzelwe iinkonzo ze-SEO kwaye ihlinzeka ngeenkampani kunye nabaxhasi be-freelancers ngeenkonzo ezingcono zokucima idatha. Ngamanye amagama, sinokuthi yinto yesibini ye-SEO kunye nedrafraper yedatha. Ukongeza, iBraw Scrape iyakwenza imisebenzi ehambelana nokukhangela injini yokukhangela, ukuthumela izimvo, ukuqhagamshelanisa ikhonkco, ukucinga ngegama elingundoqo kunye ne-SEO kwiphepha.
I-CloudScrape iyisiqulathi esisekelwe kwisiphequluli sewebhu kunye nomhleli we-intanethi esinceda ukukhangela inani elikhulu leenkcukacha ngaphandle kweengxaki. Isinika isibonelelo sokugcina idatha kwiiplati ezahlukene zokugcina ifu ezifana neBhokisi.net kunye neGoogle Drive..Ungakwazi nokugcina idatha yakho kwifom ye-CSV ne-JSON. Ngenye yezona zinkonzo ezinamandla kakhulu kunye neenkcukacha eziseleyo kwi-intanethi ezikunceda ukuhamba ngezaziso, zizalisa iifom, zakha iirobhothi kwaye zichonga idatha yesikhathi sangempela.
4. I -Webebiner
IWebminer iyi-program edumile ye-scraping program kwaye isebenza njenge-automation enamandla kunye neenkonzo zokubonisana. Kusuka kwedatha yenkcazelo yangempela kwiziko elilodwa, esi sixhobo sinika ulwazi oluchanekileyo imihla ngemihla kwiifom ezahlukeneyo. Kucoca kwakhona idatha ngokucima iziqulatho kunye neziqulatho ezingabalulekanga, kukunika iziphumo ezingcono kakhulu.
i-Mozenda yinkonzo yangempela kunye neyephambili yokukhangela i-website kunye ne-data extraction tool. Iyakuboniswa ngokugqithisiweyo ngamanqaku ahlukeneyo kwaye iza ne-architecture ephakamileyo yefu, ukunikezelwa ngokukhawuleza, ukusabalalisa okungcono kunye nokufikelela okulula kwiintlobo ezininzi zeenkcukacha. Ungalungisa iifayile zakho kwaye uzifake kwiindlela ezahlukeneyo usebenzisa iMozenda. Le nkqubo iyaziwa ngokuchaneka kwayo kwaye ayifuni ukugcinwa.
6. I-Visual Web Ripper
I-Visual Web Ripper isisombululo esisodwa sokucoca (i) ukukhutshwa kunye nokuvunwa kwewebhu. Ngenye yeenkcukacha ze-intanethi ezinamandla kunazo zonke kwi-intanethi. Isixhobo siqokelela idatha kwimiyalezo yomibini kunye nomfanekiso. Emva koko luhlela idatha ngokusekelwe kwiimfuno zakho kunye neziphumo zihlala zixabisekileyo kwaye zincedo.
I-WebHose, ebizwa ngokuba yiWebhose.io, yinkqubo edityanisiweyo yefayile ye-intanethi kunye nenkqubo yokudibanisa eyenza ukufikelela okulula kwixesha langempela kunye neloludwe oluhle. Unokukhangela amawaka eesayithi kunye nezixhobo ze-intanethi kwaye ulondoloze izinto zokugqibela ngeelwimi ezingama-200. Kukunceda uhlanganise uluhlu olubanzi lweeforamu, iintengiso zeendaba, ii-blogs kunye nabathengisi be-intanethi.